Siyaasyiinta Garabka Muqdisho oo ku tilmaamay Col. C/llahi Yusuf iyo grabkiisa kuwo ka soo horjeeda dhexdhexaadintii uu ku baaqay Col. Barre Hiiraale
Warbixin ay soo saareen xubnaha labad gole ee garabka Muqdisho ayaa maanta cambaareeyey khilaafka ay sii xoojinayaan kooxda C/llahi Yusuf oo ka shaqeyneysa inuusan qabsoomin dhexdhexaadintii uu soo bandhigay Barre Hiiraale.
Waxey sidoo kale ka hadleen iney kooxda Jowhar shaqo ka dhigteen howlo macno dara ah oo ay qoorta isku gelinayaan howlwadeenada haya xilalka kala duwan ee dowlada. Waxeyna tusaale u soo qaateen in xilkii gudoomiyaha baarlamaanka ay u magacawdeen ku xigeenkiisa, taasna ay dhalineyso in wixii hadda ka dambeeya ay qolo walba magacaabato howlwadeenada xilalka dowlada, taas oo ay ka dhalaneyso isqabqabsi fara badan.
Cumar Xaashi oo u hadlay xubnaha labada gole ee Muqdisho ayaa tilmaamay iney dhimatay rajadii laga qabay in shirkii dib u heshiisiinta lagu qabto magaalada Kismaayo kadib markii ay garabka C/llahi Yusuf diideen ka soo qeybgalka gogoshaas, iyagoon wax jawaaba ka bixin martiqaadkii loo soo fidiyey. Cumar Xaashi waxa uu sheegay in hadii ay sii socoto is qabqabsiga xagga xilalka ay keeni doonto in sidoo kale la isku qabsado xilalka Madaxweynaha iyo Ra’isulwasaaraha. Waxa uu sheegay in hadii aysan ka waantoobin isla markaana aysan joojin faragelinta ay ku hayaan xilka Gudoomiyaha Baarlamanka in iyaguna ay qaadi doonaan talaabooyin ay xilka kula qabsanayaan madaxweynaha iyo Ra’isulwasaaraha.
Warsaxaafadeedka ay soo diyaariyeen xubnaha labada gole ee garabka Muqdisho ayaa waxaa laga dareemayey in haddii ay burburtay rajadii laga qabay in lagu kulmo magaalada Kismaayo ay kooxdan qorsheynayaan iney soo dhisaan madaxweyne iyo golihiisa dowlada oo ka howlgala magaalada Muqdisho.
Kooxda taageersan C/llahi Yusuf ayaa wadatay qorshe ay ku fashilineyso gogosha uu dhigay Barre Hiiraale, laakiin tooda ka hor ayey waxey saadaalinayeen ineysan kooxda Xamar oggolaaneynin hindisaha nabadeynta Barre Hiiraale. Markii ay ogaadeen in kooxda Xamar ay si buuxda raali uga yihiin nabadeynta Barre Hiiraale ayeey la soo baxeen shaxdoodi hore oo ay ku diidanayeen shirka Kismaayo, iyagoo iska dhaadhiciyey in dib u heshiisiintii ay dhamaatay, wixii harayna ay kooxda Jowhar dhameystireyso.
Ujeedada Col. C/llahi waa wax iska cad, wuxuuna doonayaa waa dagaal ka qarxa Kismaayo, Jowhar iyo Xamar, mana ahan qof u diyaara nabad iyo xasilooni siyaasadeed oo ka dhalata dowladnimo Soomaaliyeed.